Madagascar - Kolikoly tao amn'ny ENMG - Nisy nandoro ny porofo reheta - Taratra 10 mars 2018 T - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Corruption Madagascar Madagascar – Kolikoly tao amn’ny ENMG – Nisy nandoro ny porofo reheta...
Tsy mbola nisy tahaka ity ! Nisy nandoro, omaly, ny efitra iray nanagizana ny taratasy manaporoo ny fisian’ny kolikoly tamin’ny fanadinana hidirana ao amin’ny ENMG. Voalaza fa tompon’andraikitra ambony ao amin’ny fitsarana no nahavita izany …
Nisy niditra an-tsokotsoko tao amin’ny ENMG, omaly maraina be, ka nandoro ireo taratasy noidina tao amina efitra iray tao an-toerana. May kila ireo taratasy rehetra efa natao « scellae » raha ny fantatra. Araka ny vaovao voaray, avy amin’ny loharanom-baovao iray, tompon’andraikitra ambony ao amin’ny ministeran’ny Fitsarana sy ny mpiara-miasa aminy no niditra an-tsokotsoko tao an-toerana, omaly alina. « Namaha ny scellage ireo, ary tao rian’izay ny nitrangan’ny firehetana « , hoy ny fanazavana.
Araka ny fanazaana azo ihany, taorian’ny nivoahan’ny didim-panjakana ny nanafoanana ny valim-panadinana ho mpianatra mpitsara farany teo noho ny resaka kolikoly, natao scellage ny taratasy rehetra maneho ny porofo ny amin’ny fisian’izany tamin’iny fifaninanana hidirana ho mpianatra mpitsara tao amin’ny ENMG iny. Teo imason’ny mininistry ny Fitsarana, ny Bianco, ny ministry ny Asa ary ny ENMG no nanaovan’ny vadintany ny scellage. Toy izany koa ilay efitra namatrahana ireo taratasy porofo ireo.
Omaly maraina be anefa, nivoaka setoka tao anatin’io efitra io ke rehefa nozahana izany, hita fa may kila tanteraka tao anatin’ialy efitra ireo taratasy. Nisy nahatsikaritra anefa ireo olona niditra tao ka tamin’izay no nahalalana fa tompon’andraikitra ambony ao amin’ny ministeran’ny Fitsarana ireo nandalo yao an-toerana talohan’izao.
Fantatra fa misokatra indray ny fanadihadiana momba ity tranga farany ity. Nisy nahita ieo olona nandoo ? Nopotehina ny porofo momba ireo kolikoly taminy fifaninanana hidirana ho mpianatra mpitsara. Mazava ho azy, fa misy tafiditra amin’ny resaka kolikoly ireo tompon’andraikitra ambony ireo. Anjaran’ny mpanao famotorana anefa ny manaporofo izany rehetra izany. Toe-javatra mahagaga ihany raha sendra ka loza ts nahy. Inona ny tanjon’ireo nahavanona ity loza ity. Andrasana ny fivivoaran’ny toe-draharaha.
Article précédentMadagascar – Concours d’entrée à l’école de la magistrature – Les copies de la discorde brûlées – Express madagascar du 10 mars 2018
Article suivantMadagascar – Les copies du concours des magistrats suspecté de corruption brûlées avant-hier – midi-madagasikara du 10 mars 2018